Lamjung Manang News | » रेविज लागेर एक बालक सिकिस्त, ४२ जनालाइ एण्टी रेविज भ्याक्सिन दिइयाे रेविज लागेर एक बालक सिकिस्त, ४२ जनालाइ एण्टी रेविज भ्याक्सिन दिइयाे – Lamjung Manang News
बेसीशहर, भदाै २२ गते ।
बेसीशहरकाे एक विद्यालयमा अध्ययनरत एक बालकलाइ रेविज राेग देखा परेकाे छ । मर्स्याङदी गाउँपालिका घर भइ हाल बेसीशहरकाे पुरानाे नगरपालिका कार्यालय नजिकै कालिका चाेकमा बस्दै अाएका अर्थली प्याराडाइज अंग्रेजी विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने सुदिप तामाङ नाम गरेका बालकलाइ रेविज राेग लागेकाे हाे ।
झण्डै १ महिना अघि स्कूल विदा भएका बेला मर्स्याङदी गाउँपालिका वडा नं. ३ खुदीस्थित गाउँकाे घरमा गएकाे बेला उनलाइ कुकुरले टाेकेकाे भएपनि समयमा यसबारेमा अभिभावकलाइ नभनेका कारण उनले रेविज विरूद्धकाे खाेप पाएका थिएनन् ।
गत बिहीबार ज्वराे अाउने र पेट दुख्ने भएपछि विद्यालयबाट विदा लिएर घर गएका उनलाइ उपचारका लागि बेसीशहरस्थित सामुदायिक अस्पताल लगिएकाे थियाे । उनकाे उपचारका क्रममा रेविजकाे लक्षण देखिएपछि उनलाइ परीक्षणका लागि शुक्रबार काटमाण्डाैं लगिएकाे थियाे ।
काठमाण्डाैंकाे शुक्रराज ज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा शनिबार परीक्षण गर्दा उनलाइ रेविज राेग लागेकाे ठहर भएकाे हाे ।
समयमै खाेप नपाएका कारण उनकाे शरीरमा रेविजकाे संक्रमण फैलिएकाे बताइएकाे छ ।
ती बालकलाइ रेविज लागेकाे थाह भएपछि अाइतबार साे विद्यालयका दर्जनाैं विद्यार्थी, शिक्षक लमजुङ सामुदायिक अस्पताल बेसीशहरमा रेविजकाे भ्याक्सिन लिन पुगेका थिए ।
उनकाे पछि साे विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अन्य विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरू त्रसित भएका छन् । रेविज राेग कसरी सर्छ भन्ने ज्ञान नभएका कारण अधिकांश अभिभावकहरू खाेप लगाउन भनि बालबालिकालाइ लिएर अस्पताल पुगेका हुन् । अस्पताल पुगेका विद्यालयका प्रिन्सिपल उद्धव घिमिरेले अस्पतालका चिकित्सकहरूसंग राेगबारे जानकारी लिएका थिए । यस सम्बन्धमा उनलाइ शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका डाक्टरसंग प्रत्यक्ष भिडियाे वार्ता समेत गराइएकाे अस्पतालका निर्देशक हेमन्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अस्पतालले बिरामीकाे सम्पर्कमा रहेका र जुठाे खाएका केही विद्यार्थी, शिक्षक र विरामीका अाफ्न्त गरी ४२ जनालाइ रेविजकाे भ्याक्सिन एअारभी लगाएर पठाएकाे छ ।
एण्टी रेविज भ्याक्सिन (एअारभी) लिन विद्यार्थी र अभिभावककाे चाप बढेपछि र रेविज राेगकाे बारेमा जानकारी दिन अस्पताल निर्देशक हेमन्त श्रेष्ठ, अस्पतालका मेडकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. प्रकाश साहू, डा. शरण लिम्बु, इमर्जेन्सी तथा अाेपीडि इन्चार्ज गणेश गुरूङ, स्वास्थ्यकर्मी रामचन्द्र ढकालसहितकाे टीमले विद्यालयमा गइ रेविज राेग के हाे ? कसरी सर्छ ? के गर्दा सर्दैन ? राेग लागेमा के गर्ने अादि विषयमा विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र अभभावकलाइ अभिमुखीकरण समेत गराएका थिए ।
रेविज राेगबारेका केही जिज्ञासा र तिनकाे उत्तर शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुनसंगकाे प्रश्नाेत्तरः
१) रेबिज रोगीलाई छोएमा, खान दिएमा, चलाएमा वा सो रबिज लागेको व्यक्तिको मलामी गएमा के गर्ने ?
उत्तर: खोप लिनु पर्दैन तर बिरामीको र्‍याल आँखा, शरीरका घाउँमा, वा मुखमा परेमा भने लिनु पर्छ ।
२) शंकास्पद रेबिज लागेको जनावरको मुखमा हात हाली (जस्तै गाई, भैसी, बाख्रा, पालुवा कुकुर आदि) औषधि खुवाउदा के गर्ने ?
उत्तर : कृषकहरु खासगरी खेतीपाती, घाँस दाउरा गर्ने र हातमा सानोतिनो चोटहरु हुनसक्ने भएकोले खोप लिने ।
३) रेबिज लागेको जनावर (जस्तै बाख्रा, भैसी, राँगा) को मासु थाहा नपाएर खाए खोप लिनु पर्छ ?
उत्तर : मासु पकाएर खाने भएकोले खोप लिनु पर्दैन ।
४) रेबिज रोग लागेको गाई वा भैसीको दुध थाहा नपाएर खाइयो भने रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ ?
उत्तर : हालसम्म रेबिज रोग लागेको जनावरको दुध खाएर रेबिज रोग लागेको प्रमाण छैन र बिश्व स्वस्थ संगठनका अनुसार पनि त्यस्तो स्थितिमा खोप लिनु नपर्ने भनेर निर्देशिकामा भनिएको छ ।
५) रेबिज लागेको रोगीको जुठो खाएमा के गर्ने ?
उत्तर : लक्षण देखिनु पुर्ब जुठो खाएमा खोप लिनु पर्दैन । किनभने रेबिज भाइरस लक्षणहरु देखा परेपछि मात्र सो बिरामीको र्‍यालमा देखापर्न थाल्छ । रगत, दिसा, पिसाबबाट रेबिज भाइरस सर्दैन ।
६) जनावरले टोकेर खोप लिईरहेको तर यसै बीच आफ्नो जुठो परिवारका अरु सदस्यहरुले खाए । त्यस्तै श्रीमान र श्रीमती बीच पनि यौन सम्पर्क भयो । उनीहरुले पनि खोप लिनु पर्छ ?
उत्तर- पर्दैन ।
७) कुकुरले टोकेको घाउ सानो छ । अरुले खोप लगाउनु पर्दैन भन्छ । के हो सत्य ?
उत्तर : घाउ सानो होस् वा ठुलो रेबिज बिरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ ।
८) कुकुरको सानो छाउराले टोकेको छ । कुकुर सानो भएकोले मलाई खोप लगाउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ । के गर्ने ?
उत्तरः कुकुर सानो होस् वा ठुलो त्यसको पृष्ठभुमि थाहा छैन भने खोप लगाउनु पर्छ । हाम्रो अनुभवमा धेरै मानिसहरुले बाटोमा भेटिएका साना छाउराहरुले टोकेपछि खोप नलगाउँदा रेबिज लागेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।
९) के टिटानसको खोपले रेबिज रोगबाट बचाउँछ ?
उत्तर : आजभोली धेरै मानिसहरु टिटानसको खोप लगाएपछि बढी ढुक्क भएको देखिन्छ र कति त यही खोप लगाएपछि रेबिज खोप लगाउन समेत नआहेको देखिन्छ । नतिजा, रेबिज लागेको जनावरले टोकेको रहेछ भने रेबिजको कारणले उनीहरुको मृत्यु समेत भएको हामीसँग अनुभवहरु छन् । तसर्थ रेबिज खोप अनिवार्य हुन्छ ।
१०) थाहै नपाई बाहिरको कुकुरले जुठो हालेको खानेकुरा खाइयो । मलाई रेबिज सर्छ भनेर डर लागेको छ।मैले रेबिजको खोप लिनु पर्ला ?
उत्तरः आवश्यक छैन।
११) एउटा मात्र लगाउने सुइ पनि हुन्छ भनिन्छ, के यो सत्य हो ?
उत्तर : सत्य होइन । हालसम्म त्यस्तो खोप उपलब्ध छैन ।
१२) कुकुरले टोकेको ३ दिन भित्र खोप लगाउनु पर्छ भनेको सुनेको थिएँ, के यो साचो हो ?
उत्तर : होइन, कुकुरले टोकेपछि जतिसक्दो चाडो सुइ लगाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
१३) घाउँमै लगाउने सुइ पनि हुन्छ रे नि ? यो किन र कति समय भित्र दिइन्छ ?
उत्तर : घाँटी भन्दा माथि, हातका औलाहरुमा र शरीरमा धेरै र गहिरो घाउहरु भएमा ईमुनोगलोबुलिन भन्ने रबिज बिरुद्धको खोप दिनुपर्छ। यो त्यहि घाउहरुको वरिपरी र तत्काल दिनुपर्छ । यसले आलो घाउमा रेबिजका भाइरसहरु भए तुरुन्त मार्ने काम गर्छ । यो संगै अरु नियमित खोपहरु पनि पुरा गर्नु पर्छ ।
१४) बादँर वा मुसाले टोकेमा के गर्ने ?
उत्तर: नेपाल सरकारको निर्देशिका अनुसार मठ मन्दिर तिरका बादरले टोकेमा खोप लगाउनु पर्दैन तर त्यहि समयमा अरु धेरै मानिसहरुलाई पनि टोकेमा भने खोप लगाउनु पर्छ । त्यस्तै घरमा मुसाले टोकेमा पनि रेबिजको खोप लगाउनु पर्दैन ।
कुनै पनि जंगली जनावरले टोकेमा पनि रेबिज बिरुद्धको खोप जतिसक्दो चाडो लिनु पर्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी झन्डै ९२५ को हाराहारीमा कुकुरको टोकाईको कारणले सुइ लगाउन आउने र रेबिज कुकुरकै टोकाईको कारणले बढी रेबिज लाग्ने गरेको तथ्यांक भएकोले यी माथि प्रश्न उत्तरमा पनि कुकुर भनेर उल्लेख गरिएको हो यधपी यो कुनै पनि जनावरको हक लागु हुन्छ ।